I-RedNotebook, iphephandaba ngekhulu le-XXI | Kusuka kuLinux
Amajenali yilezo zincwadi ezincane ezake zasetshenziswa ukunaka usuku lwethu nosuku, noma ngabe ungumhloli wamazwe, umuntu ukhohlwa, noma umane nje ufuna ukuba nerekhodi lempilo yakho, iphephabhuku kwakuyithuluzi elikhethiwe.
I-RedNotebook iletha lolo lwazi kukhompyutha yethu ngohlelo olulula futhi oluhleleke kahle, oluzosivumela ukuthi sibhale "idayari lokuzula" nazo zonke izinzuzo ezilethwa ukukwenza ngokwamanani.
Lapho siyivula, sizohlangana namanye amakhasi asevele ebhaliwe asikhombisa ukusebenza kwazo zombili izinhlobo nokuhleleka; Ukufaka okuqukethwe, mane ukhethe usuku bese uqala ukubhala, ngoba inhloso yejenali ukubhala izinsuku. Ngaphezu kwalokho, sinezinketho ezithile zokuhlela, ezinjengalezi: isibindi, omalukeke, imigqa edwetshiwe, enezinombolo namachashazi, izixhumanisi, faka izithombe, phakathi kokunye.
Njengokuthintwa kwenhlangano, singangeza namathegi nezigaba ezihambelana nosuku ngalunye, ukuze sikwazi ukuthola kalula umcimbi othile ekusesheni okulandelayo; Kubandakanya "ifu lethegi" ukuthola kalula amathegi noma amagama asetshenziswa kakhulu, nokuthi yini okwaziwa kakhulu ngokuthi "usesho olusheshayo" noma usesho olusheshayo, olubonisa imiphumela njengoba uthayipha.
Lapho sifuna ukugcina okubhaliwe singathumela ku-Umbhalo, i-HTML, i-PDF, iLatex noma ngokumane sikhethe ifolda ukusindisa umsebenzi wethu, ogcinwa ngokuzenzakalela njengombhalo osobala ne-syntax ehambisanayo. Okubi kungaba iqiniso lokuthi alinayo inketho yokuvikela iphasiwedi, futhi mhlawumbe ukungabi nomsebenzi wokuvumelanisa nge-Intanethi.
Kungenzeka, iRedNotebook iyatholakala ezinqolobaneni zokusabalalisa okuthandayo, ngakho-ke bekungeke kudingeke ngaphezu kokubheka kumphathi wakho wephakeji wefayela elihambisanayo (imininingwane engaphezulu).
Okwe-Ubuntu nokuhambisanayo, indawo yokugcina etholakalayo ihlale inenguqulo yakamuva:
i-sudo engeza-apt-repository "deb https://robin.powdarrmonkey.net/ubuntu maverick /"
sudo apt-get ukufaka i-rednotebook powdarrmonkey-keyring
I-tarball enohlobo lwakamuva iyatholakala:
Landa iRedNotebook 1.1.4
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-RedNotebook, iphephandaba ngekhulu lama-XNUMX
Kuhle kakhulu! 🙂
Kuyathakazelisa, lokhu kungangisindisa amanothi ambalwa we-tomboy. Kungamangalisa uma le software ingahlanganiswa nokuziphendukela kwemvelo.